Amai Prisca Mupfumi neVamwe Voita Misangano muLondon
Mbudzi 08, 2018
Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika, Amai Prisca Mupfumira, nevamwe vakuru muhurumende, vari muLondon kuBritain kwavapinda musangano wezuva rimwechete we Investment Forum waitrirwa pa London Hilton Canary Wharf iri muCentral London.
Musangano uyu wakarongwa neZimbabwe Investment and Development Agency iyo yakaburitsa gwaro neChitatu ichiti chinangwa chemusangano uyu change chiri chekushambadza Zimbabwe nemikana iri munyika munyaya dzezvemabhizinesi nekushanyirwa kwenyika.
Vanoongorora nyaya dzezvehupfumi vashoropodza danho rehurumende rikuita rwendo rwune vanhu vakawanda vanobva kuZimbabwe vachienda kuLondon kunokwezva vekunze vachiti misnagano yakadai inogona kurongwa nemuzinda weZimbabwe muBritain.
Vanhu ava vanoti Zimbabwe iri parumananzomba sezvo zvisina zvisina kumira zvakanaka munyaya dzemari.
Hatina kukwanisa kubata Amai Mupfumira kuti tinzwe tivi ravo.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekushanyirwa kwenyika, Amai Concilia Chinanzvavana vanoti basa ravo sekomiti nderekuona kuti zvirongwa zvebazi rekushanya kwevanhu munyika zvaitwa negwara rakanaka here.
Hurukuro naAmai Concilia Chinanzvavana